လ, ​ရောင်​လှုံတဲ့ည | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » လ, ​ရောင်​လှုံတဲ့ည	10
Posted by naywoon ni on Mar 30, 2015 in Poetry | 10 comments
​မော​ဟ အမြိုက်​​ဆေးနဲ့ အသက်​ဆက်
သားတို့ မသတီ​တော့ဘူး အ​မေ ။
အ​မေက​ လောကကြီးကိုငြိမ်း​အေး​စေမယ့်​ လမင်းကြီးဆို
ဖုံးအုပ်​လာတဲ့ တိမ်​မည်း အဆုပ်​အဆုပ်​တွကို ​ဖောက်​ထွက်​
​လောကသား​တွေ လ,​ရောင်​လှုံ ပါရ​စေ
ပူ​လောင်​တဲ့ လူသားလုပ်​ အလင်း​ရောင်​​တွေခဏငြိမ်းခဲ့
လ, အလင်း​ရောင်​ စစ်​စစ်​နဲ့
ည , သဘာဝကိုခံစား
​မော​ဟ ​တွေ​ဝေးစေ ။ ​နေ၀န်းနီ
Alinsett@Maung Thura says: ဘဝဆိုတာ လသာတဲ့ညတွေချည်းပဲ မတွေ့ရဘူးလို့တော့ လက်ခံပါရဲ့…
ခင်ဇော် says: ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်တော့
ဥနီ က မနုစာရီလို လ ရောင်လှုံပြီ အောက်မေ့လို့ လာပြေးကြည့်တာ။
naywoon ni says: နီလည်း ခြင်းဂျားပူမှာ မနုတ်​ဆာရီလို လ​ရောင်​ လှုံခြင်​ရို့လား ခင်​​ဈော်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: လကွယ်ည ဆိုတာ မရှိဘူးဆိုရင်
လပြည့် ည ဟာ သိပ်ပြီးတော့ ကြည်နူးသာယာဖို့ ကောင်း
naywoon ni says: ညတိုင်း လ သာရမယ်​လို့ မဆိုလိုပါဘူး ဗျာ ခု​တော့ လဆန်းရက်​ကနဲနဲ လဆုတ်​ရက်​က များများ မညီမျှ ရုံတင်​မဟုတ်​ လ သာတဲ့ ညမှာ​တောင်​ တိမ်​မည်းတစ်​အုပ်​က လ ​ရောင်​ ကို ဖုံးကွယ်​​နေလို့ လ ကို ​ဖောက်​ထွက်​ပြီး လပြည့်​​ည တစ်​ည​လောက်​ သာ​ပေးပါ လ ​ရောင်​ လှုံ ချင်​လို့ပါလို့ ​ပြောတာပါ ။
uncle gyi says: တိမ်မည်းကအုပ်လို့ရွှေလရယ်မသာနိုင်ဖူးဆို
naywoon ni says: ဖ​ယောင်းက တလုပ်​ပြည်​က လာတာ ခုတစ်​​လော နယ်​စပ်​မှာစစ်​ဖြစ်​​နေလို့ အ၀င်​မရှိဘူး ဆိုလား ​ပြောသံကြားတာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: မြန်မာပြည်ခမြာ.. တကယ့်ကို ကျိန်စာ…
အရင်ဆယ်စု ၃-၄ခုလောက်ကများ.. စိန့်ပြည်ဆိုတာစုတ်ပြတ်လို့…
အဲဒီတုံးက.. မြန်မာပြည်က.. စိန့်ပြည်နဲ့ကျွန်းကိုင်းမှီ..ကိုင်းကျွန်းမှီနဲ့.. အနစ်နာခံလိုက်ကြရတာ…။
ငမွဲချင်း.. ဘိုင်ပွတ်ကြတာမှာ.. စိန့်ပြည်က.. ပိုသာသွားသမို့.. အခုနှစ်တွေလည်းရောက်ရော… စိန့်ပြည်က. ကမ္ဘာ့ဒုတိယအချမ်းသာဆုံး.. ကုန်အထုတ်နိုင်ဆုံးပြည်တခုဖြစ်..
ဗမာတွေခမြာ.. ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်ကြီး.. ဒီလိုအခြေရောက်ရင်.. ဒရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး.. ဆွဲတင်ခံရမယ့်အခြေအနေလေးရောက်မှ… စိန့်ပြည်သားတွေကို.. ရန်လုပ်မုန်းတီးကြရတဲ့အခြေအနေရောက်….။
ယူအက်စ်နဲ့.စိန့်ပြည်… ဆင်ဖြူတော်တွေမှီပြီး ကြံစုတ်ကြတော့ပါလားကွယ်…
ယိုးဒယားနဲ့.. အင်ဒိုနီးရှားသွားအလုပ်လုပ်ကြရင်.. ကျွန်သဘောက်ပဲဖြစ်မပေါ့…။
ကျိန်စာ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
အူးစည် says: သဂျီး မန့်လာခဲ့တဲ့ ဒလျောက်မှာ ဒီ အမန့်ကို အကျိုက်ဆုံးပဲ..
ချဲ့လင့်မရှိရင် ဆင်ဖြူတော်မှီ ကြံစုပ်တတ်ရမယ်..
သဌေးနဲ့ပေါင်း သဌေးမဖြစ်ရင်တောင် ကပ်ပီး အရက်ကောင်းလေး မာဆပ်လေးကလပ်လေးတော့ တက်ဖူးလောက်မှာ။
သာပေါင်း ညာဝါး ၀ါဒီနဲ့မှ ကျိန်စာလွှတ်မယ်… :cool:
Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: အဲ့ဒိ​တော့ ပြည်​သူ​တွေအတွက်​အနစ်​နာခံ တိုင်းပြည်​​ကောင်းစား​ရေးကိုပဲ ကြည့်​တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်​မှရမှာ ။ ၂၀၁၅ မှာ ဘယ်​ပါတီကိုမဲ​ပေးသင့်​သလဲ ။ ဘယ်​ပါတီကို မဲ မ​ပေးသင့်​သလဲ အ​ဖြေက ရှင်း​နေဘီပဲ ။ Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.